Jereo izay rehetra hitanao ao an-tanànan'i Salamanca | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita ao Salamanca
Susana Garcia | | Toerana fitsangatsanganana, España
La Tanàna Salamanca Izy io dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra eto amin'ny firenentsika ary tsy isalasalana fa toerana mety ho an'ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro mba hahafantarana ny zoron'ity tanàna manan-tantara ity. Ny tsangambato, tranobe ary olona malaza azy dia nanao azy ho World Heritage Site tamin'ny taona 88.
Raha te hahita ianao izay hitanao rehetra any Salamanca, manome anao hevitra vitsivitsy izahay, miaraka amin'ireo toerana tena ilaina lalovanao raha mitsidika ny tanàna ianao. Tanàna manana tantara maro izay nofidian'ny mpanoratra sasany ho aingam-panahy.
1 Katedraly vaovao sy katedraly taloha
2 Majistra Plaza
4 Tranon'ireo akorandriaka
5 Lis Lis
6 Sahan'i Calixto sy Melibea
Katedraly vaovao sy katedraly taloha
Any Salamanca dia tsy katedraly iray ihany, fa afaka mitsidika roa isika. Tamin'ny firoboroboan'ny tanàna, ny voalohany, izay nantsoin'izy ireo hoe Katedraly taloha, dia lasa kely loatra, ka ny faharoa dia ny Katedraly Vaovao. La Vieja dia fanehoana ny Romanesque medieval. Miraikitra amin'ny rindrina izy ireo, noho izany mora ny mitsidika azy ireo, saingy mahaleo tena ny fidirana amin'ny tsirairay. Ao amin'ny Katedraly taloha dia miavaka ny Torre del Gallo na ny trano fiangonana. Ny Katedraly Vaovao dia manana fomba Gothika sy ny façade tokony hitady ilay mpanamory sambondanitra malaza ianao, tarehimarika toa nalaina avy tamin'ny sary an-tsaina futuristic ary lasa sary famantarana ao an-tanàna. Ity dia iray amin'ireo zavatra tadiavina amin'ny endrik'ireo tsangambaton'i Salamanca, na dia tsy izy irery aza. Mandritra ny fitsidihanay, dia mety handany fotoana be hikarohana tarehimarika amin'ny facades isika.
Ireo kianja malalaky ny tanàna Espaniola maro dia tsy isalasalana fa ivon-toerana sosialy nandehanan'ny olona nitady fialamboly. Tsy niova firy izany nandritra ny taona maro, satria mbola toerana ara-tsosialy aleha hatrany ny Ben'ny tanàna Plaza. Toy ny mihidy quadrilateral ary manana arcade izay misy bara sy terraces fitsaharana sy hisakafoanana kely. Raha iray amin'ireo mitsidika mora foana isika dia azo antoka fa hamakivaky ilay ben'ny Tanànan'i Plaza mahafinaritra imbetsaka. Azontsika atao koa ny mankafy ny rivo-piainana velona amin'ity tanànan'ny oniversite ity. Ao amin'ity kianja miendrika baroque ity no ahitanao ny façade an'ny Lapan'ny tanàna. Tokony hijery eo amin'ny toerana fialamboly ianao ho an'ny sasany izay lasa andrim-panjakana, toy ny Novelty.
Ny University of Salamanca dia afaka mitazona ny anaram-boninahitra ny zokiny indrindra any Espana, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ireo mpizahatany mitsidika azy io dia tsy isalasalana fa manao izany mba hahitana ny maso, satria sahona vato toa mijanona eo amboniny izay tsy maintsy hita. Amin'ny maha-clue azy dia holazaintsika fa eo amin'ny faritra mety amin'ny facade izy io ary mijanona eo amin'ny karan-doha ny sahona. Voalaza fa nandany ny fotoanany ireo mpianatra nitady azy satria raha mahita azy izy ireo dia hanome vintana azy ireo handalo ilay hazakazaka. Ny marina dia toa tsy mora ny mahita ny sahona ary misy ny olona mandany fotoana be mitady izany amin'ny fasad. Tokony hangeja ny masontsika isika ary ambonin'izany rehetra izany dia manana faharetana hahafahantsika mandalo ny fanambin'ny sahona ao Salamanca.
Ny Casa de las Conchas dia lapa naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny fomba Gothic. Fantatra amin'izany anarana izany izy satria eo amin'ny façade azy dia manana akorandriaka mihoatra ny roanjato voasokitra amin'ny vato, izay manome azy endrika tokana sy tokana. Ity lapa ity dia manana singa maro samy hafa, avy Fomban'ny Mudejar, Gothic na Renaissance. Ao anatin'ity trano ity dia misy trano famakiam-boky amin'izao fotoana izao izay azo tsidihina, ary koa mpitsikilo tsara tarehy. Misy angano manodidina ireo akorandriaka ireo milaza fa saritany saritany no miafina ao ambanin'izy ireo ary izany no mahatonga ny sasany vaky.
Casa Lis dia Trano maoderina maoderina izay misongadina amin'ireo varavarankely fitaratra miloko tsara tarehy amin'ny atsimo atsimo. Niorina teo amin'ny rindrin'ny tanàna izy io ary ankehitriny dia misy ny Museum of Art Nouveau sy Art Deco. Manana fampirantiana sy hetsika atao izy io. Maimaim-poana ny fidirana.
Sahan'i Calixto sy Melibea
Na dia mety tsy dia mahavariana loatra aza ny fitsidihana an'io zaridaina kely io, dia heverinay fa tsy maintsy jerena ihany koa izany noho ny fifandraisany amin'ny sanganasa malaza an'ny 'La Celestina', izay efa novakiantsika rehetra tany am-pianarana. Voalaza fa io no zaridaina nanentanan'izy ireo aingam-panahy hanoratra ny sanganasa momba ny olon-tiana Calixto sy Melibea, noho izany dia mahaliana hatrany ny mijanona sy mieritreritra izay mety ho aingam-panahy. Avy amin'ny arofanina ianao dia afaka mankafy ny fomba fijery tsara momba ny tanàna, na dia toerana be olona aza noho ireo antony ireo, ka sarotra ny mahita ny lafiny romantika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Inona no ho hita ao Salamanca
Ny Tilikambon'i Belém